Maamulka KMG ee magaalada Kismaayo oo sheegay inay dar-dar galinayaan howlihii maamulka – Radio Daljir
Oktoobar 19, 2012 7:28 b 0
Kismayo, Oct 19 – Maamulka KMG ee magaalada Kismaayo? oo ka kooban saraakiil ka mid ah militariga dowladda Soomaaliya iyo? Raaskambooni ayaa si rasmi ah u bilaabay howlihii maamulka ee ka jiray magaalada Kismaayo, kadib ka bixitaankii magaalada ee ururka Al-Shabaab.
C/naasir Seeraar Maaxi oo ah afhayeenka iyo madaxa arimaha bulshada ee maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ayaa waraysi uu siiyay radio Daljir? ku sheegay dhismaha guddigan in looga golleeyahay? dib usoo celinta howlihii maamulka ee ka jiray magaalada si faraha uusan uga bixin amnigii magaalada.
Waxaa uu sheegay guddiyada oo ka kooban gudiga nabadgalyada, gudiga garsoorka, guddiga maaliyadda, iyo guddiga arimaha bulshada , guddiga samafalka iyo hay’daha dhamaantood uu u qabsoomay howllo fiican, ayna ku howlanyihiin kor u qaaddida adeegyada bulshada ee magaalada.
Afhayeenka maamulka Kismaayo C/naasir Seeraar ayaa sheegay howlgalada ciidamada huwanta ah ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo lagu soo qabqabaty dad badan oo lasoo taagayo maxkamadda siloogu qaado eedaymaha loo haysto.
Sidoo kalle, waxaa uu sheegay inuu meel wanaagsan marayo qabanqaabada shirka IGAD ka waddo? magaalada Kismaayo oo lagu dhisi doono maamulka Jubba Land, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo beelaha Jubooyinka ay ka qaybqaadan doonaan.
Magaalada Kismaayo oo ah magaaladii ugu muhiimsanayd ee ururka Al-Shabaab uu lumiyay ayaa siweyn loo? dhowrayaan waxa kasoo bixi doona shirka dhawaan loo balansanyahay in magaalada lagu qabto.